DAAWO: Tababaraha Xulka Germany Joachim Low Oo Dhibaato layaab Ah La Kulmay Intii Lagu Jiray Guushii Ukraine | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » DAAWO: Tababaraha Xulka Germany Joachim Low Oo Dhibaato layaab Ah La Kulmay Intii Lagu Jiray Guushii Ukraine
DAAWO: Tababaraha Xulka Germany Joachim Low Oo Dhibaato layaab Ah La Kulmay Intii Lagu Jiray Guushii Ukraine
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 13-06-16 12:50 PM Waxaa jira taageereyaal badan oo si aad ah u jecel tababaraha xulka qaranka Germany Joachim Low.
Habka lebiskiisa ayaa ah tusaale uu kusoo jiitay taageereyaasha adduunka. Wuxuuna qoorta kusoo xirtaa safaleeti xaalad kasta oo diirranaan ah oo lagu jiro markaas. Wuxuuna sameeyaa dhaqdhaqaaq falcelin ah markasta oo xulkiisu ay qabtaan shaqo uusan la dhicin ama uu la dhacay, waana arrin kale oo soo jiidasho uu ku yeeshay.
Sabab kale oo lagu jeclaan karo ayaa ah hab ciyaareedka xulka Germany. Tayada iyo niyadsamida xulkan oo qaaday Koobkii Adduunka 2014kii ayaana si aad ah loo ammaanay, iyadoo Germany ay Axadii bilaabatay tartanka Euro 2016 xilli ay guul 2-0 ah ka gaartay xulka Ukraine.
Laakiin wax kale ayaa dhacay intii lagu jiray kulankii Axadii. Waana waxyaabo aanan sharraxaad rasmi ah ka bixin karin, balse waa hubaal inaad ugu yaraan la cajabi doontid arrintaan ku dhacday Low.
Falkaan uu sameeyey tababare Low ayaa soo jiitay indhaha adduunka, waxaana muuqaalkaan hoose si aad ah la iskula wadaagay barta Twitter ka dib markii ay kaamirooyinku qabteen Low oo inta gacanta geliyey surwaalkiisa hoostiisa misna shiirinaya.
Laba jeer ayuu sameeyey falkaan, markii hore wuxuu gacantiisa geliyey qeybta hore ka dibna kursiga keydka ayuu fariistay si uu u shiiriyo gacantiisa, markii labaad dhammaadkii ciyaartaan wuxuu geliyey qeybta dambe si la mid ah ayuuna u shiiriyey, waxay aheyd dhibaato yar oo uu la kulmay intii lagu jiray guushaan ugu yaraan cuncun ayuu dareemay.
Mise waxaa wax ka qaldanaayeen lebiska oo keenay cuncunka, maadaama uu xalay xirnaa funaanad uusan caan ku aheyn isagoo kasoo tegay shaarkiisii caanka uu ku ahaa? Fikirkaaga hoos inoogu reeb marka aad muuqaallada daawato